Chiedza Chinofa chine chigadziriso chitsva (Enhanced Edition) | Linux Addicts
Kufa Chiedza chine chigadziriso chitsva (Enhanced Edition)
Isaac | 12/05/2022 11:41 | Linux Mitambo, chiutsi
Vagadziri vemutambo Dying Light, iyo yatakambotaura muLxA pane dzimwe nguva, ikozvino vakazvibata zvakanaka nevateveri vavo uye vakavapa mubairo nekuvandudzwa kutsva (Enhanced Edition), uye chigamba chave chiripo uye icho chichaunza zvimwe zvinhu zvakanaka kune. zita iri remutambo wevhidhiyo. Saka kana iwe uchitova nazvo, unogona kunakidzwa zvizere Kutevera kuwedzera pamwe neyekupedzisira chigamba. Zvese nekuda kwekuedza kuri kuita Techland, iyo studio yakagadzira zita iri, yanga ichiita mumwedzi ichangopfuura.
Vese varidzi veKufa Chiedza, vangangoita avo vari paSteam papuratifomu, vachakwanisa kuwana Inotevera, Bozak Horde, Cuisine uye Cargo kuwedzera, iyo Ultimate Survivor pack, uye Crash Test pack. uchapupu kuti Techland inoramba ichitsigira Dying Light uye icharamba ichidaro kwemakore akawanda, zvinoita.
Kune rimwe divi, zvandaitaura nezve chigamba ndechekuti Techland yakaburitsawo chigamba chitsva chine kuvandudzwa kwakawanda. Ndiyo imwe yeaya mapeche akakura anosanganisira shanduko dzakawanda uye nhau dzeHellraid DLC neKufa Chiedza. Inosanganisirwa muchigamba ichi chombo chitsva, arsenal yakagadziriswazve, zvitsva zvinoshandiswa, mibairo mitsva, uye zvimwe zvidiki zvinowedzera. Muchidimbu, zvese zvinodiwa kugutsa vatambi uye kuwana chiitiko chinogutsa.
Iyo chigamba inodarika izvo zvakare, ichiwedzera zvidzidzo zvitsva zvezvikamu zvakasiyana zvemutambo, izvo zvinogamuchirwa kana iwe wakanamatira kumwe kunhu. Zvakare mapurani matsva ekugadzira, wongororo ye Iva Iyo Zombie PvP maitiro, nhamba huru yezvigadziriso zvebug, nezvimwe. Iwe zvakare uchawana chiitiko chitsva nevaya vanopenga mapatya mainjiniya Tolga naFatin vane 2 mibairo mitsva iripo uye 3 King Mods semibairo.
Uye usakanganwa kuti nhasi izuva rekupedzisira zita iri richatengeswa! Kana ukakasira unogona kuitora kwe60% pasi pemutengo wenguva dzose...
Rumwe ruzivo uye kutenga - Kufa Chiedza paSteam
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Kufa Chiedza chine chigadziriso chitsva (Enhanced Edition)
NVIDIA inotora nhanho yakakosha kuLinux: vatyairi vayo vanove yakavhurika sosi
CBL-Mariner 2.0 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo